Factlọ ọrụ na-emepụta valvụ - China Valve Stem Seal Manufacturers, Suppliers
Toyota Car Valve Azuokokoosisi China Manufacturer
Car valvụ azuokokoosisi 90913-02060
Ihe: VITON, FKM
Mbukota: 8 PC ọ bụla akpa
Nissan Viton Automotive Valve Azuokokoosisi China Manufacturer
Nissan Viton Automotive Valve Azuokokoosisi
Kia Mpako Valve Azụ Akara China Manufacturer
Kia Mpako Valve Na Akara
Ihe: VITON na NBR
Ngwa: Mgbe ahịa na OEM
Nissan Toyota Valve Akara
Akara valvụ valvụ bụ ngwaọrụ nke na-enye ọnụego a kapịrị ọnụ nke mmanụ na ntinye valvụ nke injin na-ere ọkụ n'ime mmanụ iji mee ka ntuziaka valvụ ahụ belata ma belata ọrụ injin. Akara valvụ valvụ dị maka mmanụ dizel na mmanụ ụgbọala na-enweghị ma na-akwalite.
GOS na-enye atụmatụ dị iche iche nke akara ngosi "ọkaibe":
Peugeot Valve Valve Stem Akara Akara China
PEUGEOT 405 206 VALVE SEALare ngwaọrụ ndị na-enye ọnụego a kapịrị ọnụ nke mmanụ na ngwongwo valvụ nke injin na-ere ọkụ n'ime ụlọ iji mee ka ntuziaka valvụ ahụ belata ma belata ọrụ injin. Akara valvụ valvụ dị maka mmanụ dizel na mmanụ ụgbọala na-enweghị ma na-akwalite.
Njikọ na-ejikọtaghị ọnụ: mezuo ọrụ nke ịtụ mmanụ
Automotive Isuzu Valve Stem Seals Oil Akara China Supplier
Akara valvụ valvụ bụ ngwaọrụ nke na-enye ọnụego a kapịrị ọnụ nke mmanụ na ntinye valvụ nke injin na-ere ọkụ n'ime mmanụ iji mee ka ntuziaka valvụ ahụ belata ma belata ọrụ injin. Akara akuku GOS valvụ dị maka mmanụ dizel na mmanụ ụgbọala na-enweghị yana ịkwalite.
Andgbọ ala na ọgba tum tum valve akara akara
Materail: FKM / VITON Okpomọkụ: -40 ～ + 250 ℃ Nrụgide: n'okpuru 0.02MPA Ọsọ Ntugharị: n'okpuru 10000rpm Valve stem seal bụ ụdị akara mmanụ, nke a na-ewukarị site na vulcanizing elu etiti na fluororubber ọnụ. A na-etinye mmiri na-emechi onwe ya ma ọ bụ waya nchara na oghere nke akara mmanụ maka akara mkpịsị aka engine. Ogwe mmanụ mmanụ nwere ike igbochi mmanụ ịbanye na ọkpọkọ na ikpochapu, na-akpata ọnwụ mmanụ, na-egbochi ngwakọta gas ...